पोखरा, २ माघ । स्याङ्जाका एक युवतीले विहीबार चम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ की २६ वर्षीया सुनीता पौडेल प्रधानले ३ छोरी र १ छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।
अस्पतालका अनुसार डा. महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा शल्यक्रियामार्फत चार बच्चाको जन्म दिइएको हो । शल्यक्रियामा ७ जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सहभागी थिए । अहिले आमा र चारैजना शिशु स्वास्थ्य ठीक रहेको छ ।
शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका डा. पाण्डेले भने, ‘पहिलो बच्चा छोरी डेढ केजीकीलाई ९ बजेर ४९ मिनेटमा निकालिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बच्चा छोरा (१.३ केजी), तेस्रो र चौथो बच्चा छोरीहरु (१.३ र १.४ केजीका) लाई ९ बजेर ५० मिनेटमा निकालिएको हो ।’
भिडियो एक्सरे गर्दा तीनवटा बच्चामात्रै देखिए पनि शल्यक्रिया गर्दा चारवटा भेटिएको डा. पाण्डले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रति ८ लाखमा एकजनाले चम्ल्याहा जन्माउने गर्छन् ।
प्रसुतिका लागि गत आइतबार मणिपाल अस्पताल पोखरामा भर्ना भएकी सुनिताको यसअघि नै एक ५ वर्षीय छोरा छन् ।
तस्बिरः खीम लामिछानेबाट